About Us - Cixi Fujing caaga Products Factory
Cixi Fujing caaga Products Factory waxaa la aasaasay sanadkii 1990, soo saaraha xirfadeed oo ku yaalla R & D, soo saarida iyo suuq-geynta ee sigaarka kala duwan. Hadda waxaan ku ahaa qeybiyaha weyn ee sigaarka caag ah oo laga dhoofiyo Japan, America, Europe, Bariga Dhexe, Koonfur-bari Eeshiya iwm Our brand maxaliga ah "Joyo" waa ugu caansan ee China.
Fujing waxa uu ku yaalaa magaalada Cixi la gaadiidka ah oo aad u sahlan. Waxay qaadataa in ka yar laba saacadood ilaa saddex garoomada waaweyn (Ningbo, Hangzhou, Shanghai) ee Shiinaha Bari.
Fujing diiradda saarayaa badbaadinayo caafimaadka iyo nolosha sigaarka '. Waxaan la dhiso a "Tubaakada Control Research Center" ee Shanghai la jaamacadaha iyo machadyada cilmi-baarista ee filtarrada 2000.Our ka saari kara in ka badan 90% nicotine, daamur iyo walax kale oo sun ah oo waxyeelo ka soo sigaar ah.
Fujing ayaa taxane ah oo mashiinada si toos ah, oo ay ku jiraan isu ururiyey, kala sooca, imtixaanka, Cabaynta iyo dhagixiina way. Heerka wax soo saarka si toos ah waa in ka badan 90% taas oo xajiya, waxyaabaha ku saabsan waxqabadka ugu wanaagsan ee qiimaha. Fujing sidoo kale waa tii ugu horaysay in ay leeyihiin aqoon-isweydaarsiga Carro-free toban kun oo fasal ee Shiinaha.
Fujing si daacad ah soo dhoweeyaa aad OEM / ODM ama shuruud kasta oo kale. Waxaan had iyo jeer diyaar u yihiin in ay kuu siiyaan fiican alaabta adeegga iyo tayada sare.
Cixi Fujing caaga Products Factory